Fantsona YouTube 5 Tsara Jeren’ireo Mpankafy Sakafo Afrikanina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2014 15:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, polski, Français, 繁體中文, Italiano, русский, Esperanto , Ελληνικά, English
Ao anatin'ny fankalazana ny Febroary ho volana natokana hoan'ny Sakafo ato amin'ny Global Voices Online isika, topazo maso ireto fantsona lahatsary Youtube mafilotra ireto izay miresaka fomba fahandro sakafo Afrikanina.
1. Nigerian Food Channel (Fantson-tsakafo Nizeriana):
Lasopy Nizeriana, sakafo maivana Nizeriana sy ny sisa maro hafa. Miha-mahazo fankasitrahana manerantany ny fomba fahandro sakafo Nizeriana ary mirehareha aho afaka mampiasa ity sehatra ity hizarana ireo sakafo mafilotra Nizeriana amin'ny fomba tsotra.
Ny lahatsary eto ambany dia mampiseho ny fomba fahandro sakafo Nizeriana Efo Elegusi, lasopy vita amin'ny voatango miaraka amin'ny hena mifanentana aminy:
2. Afro Food TV (Sakafo Afrikanina ao amin'ny Fahitalavitra):
Misorata anarana ankehitriny ary mijere tahaka ny sefon'ny nahandro sady mpikarakara, hoentin'i Yeti Ezeanii mitsangatsangana hankafy sakafo Afrikanina ianao. Mianara ireo sakafo malaza isan-karazany avy amin'ireo firenena sy faritra Afrikanina ary hianaro ny tena fikarakarana nahandro Afrikanina.
Mampiseho ny fomba fahandro vary saosy (pilau) kosa ity lahatsary manaraka ity:
Vary saosy, sakafo vary Afrikanina Tatsinanana sy ohatra tsara indrindra amin'ny hery (ambaindain'i) India manoloana ny Nahandro Afrikanina. Foto-tsakafon'i Tanzania.
3. Kadi Recipes (Sakafo Kadi):
Mahandro sy Mihinana Sakafo Afrikanina Aho.
Ao amin'ny fantsona misy ahy, hahita Fomba Fikarakarana Sakafo Afrikanina tsotra, mafilotra sy mora atao ianao. Hahita nahandro saika avy amin'ireo firenena Afrikanina rehetra ianao. Ka andeha hiaraka amiko ao amin'ny fantsona sy hahafantatra bebe kokoa momba ny sakafo Afrikanina
Mampiseho ny fomba fahandroana lasopy voanjo miaraka amin'ny trondro hatanika ity lahatsary manaraka it:
4. Taste of Tanzania (Tsiro-tsakafon'i Tanzania):
Mitondra fomba fahandroan-tsakafo ara-pahasalamana sy tsotra avy ao Tanzania ary koa indraindray avy amin'ireo firenen-kafa ao Afrika Atsinanana ho anao ity fahitalavitra ity. Mitovy amin'ny nahandro Swahali ihany ny nahandro Tanzaniana. Hianatra momba ny nahandro swahili ianao eto ary koa hotovanako fampahafantarana fanampiny isaky ny fomba fahandroan-tsakafo. Am-pahamatorana no handraisana ny fanehoan-kevitrao sy ny fanontanianao.
Mampianatra ny mpijery ny fomba fanamboarana chapati, karazana mofo fisaka ity lahatsary eto ambany ity:
5. African Food Recipes (Fomba Fikarakarana Sakafo Afrikanina):
Ny tanjoko dia ny hampianatra anareo ny fomba fikarakarana sakafo Afrikana sy Espaniola amin'ny fomba mafilotra sy ara-pahasalamana—
Mianara manao akondro frity, sakafo maika Afrikana malaza, avy amin'ny lahatsary eto ambany:
*loharano Hajian-tsary: Pejy Facebook Fantson'ny Sakafo Nizeriana. Nahazoana alalana ny sary.